Burgos Kuchenesa Service
Real Estate Listings: » Business Directory » Cleaning Contractors » US » Connecticut » Burgos Kuchenesa Service1
Post Code: 06114
Burgos Kuchenesa Service inonyanya kushambadzira, yekuchenesa uye yekuchenesa mahofisi. Kushumira nyika yese muConnecticut nenzvimbo dzayo dzakatenderedza tinodada nekupa yakanakisa mhando uye kukosha kwezvaunoda zvekuchenesa. Tine chivimbo chekukupa 100% kugutsikana.
Regended on 7. Nov 2019
Regended on November 7, 2019
Connecticut ((teerera)) ndiyo nzvimbo yekumaodzanyemba mudunhu reNew England kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweUnited States. Kana iri yeCensus ya2010, ine mari yepamusoro-soro yeiyo, Human Development Index (0.962), uye mari yepamusha yepakati muUnited States. Unoganhurwa neRhode Island kumabvazuva, Massachusetts kuchamhembe, New York kumadokero, uye Long Island Sound kumaodzanyemba. Huru yaro Hartford uye guta rayo rizere nevazhinji i Bridgeport. Icho chikamu cheNew England, kunyange zvikamu zvaro zvinowanzo kuvezwa nemapoka neNew York neNew Jersey senzvimbo yenzvimbo nhatu. Nyika inoshevedzwa yeColoudicut river iyo inenge inotora nyika. Izwi rekuti "Connecticut" rakatorwa kubva kune dzakasiyana-siyana anglicized izwi reAlgonquian re "refu tidal river" .Connecticut yekutanga vagari vekuEuropean vaive veDutch vakavaka nzvimbo diki, diki-pfupi-yekugara inonzi Fort Hoop muHartford mukubatana kwePaki uye Connecticut Nzizi. Hafu yeConsticut pakutanga yakange iri chikamu cheDutch kolony New Netherland, iyo yaisanganisira nzvimbo yakawanda pakati peConnecticut neDelaware Rivers, kunyangwe nzvimbo dzekutanga diki dzakagadzwa mumakore gumi nematanhatu nemaChirungu. Thomas Hooker akatungamira boka revateveri kubva kuMassachusetts Bay Colony uye akatanga iyo Connecticut Colony; vamwe vagari vekuMassachusetts vakatanga Saybrook Colony neNew Haven Colony. Machechi e-Connecticut neNew Haven akasimbisa magwaro eFundamental Orders, akafungisisa matunhu ekutanga muAmerica. Muna 1662, iwo matatu akabatanidzwa pasi pehumambo charter, zvichiita kuti Connecticut korona korona. Iyi yaive imwe yegumi nenhatu Makoroni akaramba hutongi hweBritain muAmerican Revolution. Connecticut ndiyo yechitatu diki dunhu nenzvimbo, makumi matatu nenzvimbo zhinji, uye yechina ine vanhu vazhinji kwazvo makumi mashanu nyika. Iyo inozivikanwa se "Bumbiro remutemo", iyo "Nutmeg State", iyo "Providence State", uye "Nyika ye Steady Habits". Yakanga ine simba mukusimudzira hurumende yemubatanidzwa yeUnited States (ona Connecticut Compromise). Rwizi rweConnecticut, rwizi rweThames, uye zviteshi parutivi rweLong Island Sound zvakapa kuConnecticut tsika yakasimba yekumakungwa inoenderera nhasi. Iyo nyika ine zvekare nhoroondo yekutora iyo indasitiri yemabasa emari, kusanganisira makambani einishuwarenzi muHartford uye hedge mari muFairfield County.